Rugby Analamanga : tsy nisy lalao raikitra | NewsMada
Rugby Analamanga : tsy nisy lalao raikitra
Tsy tontosa ny andro faharoa amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ligin’Analamanga, taranja rugby, na ny «Top 16». Fihaonana tokony ho notanterahina, omaly alahady, tetsy amin’ny kianja Malacam Antanimena. Tsy nisy nipoitra mantsy ireo fileovana tokony hilalao afa-tsy ny TFMA Ankasina sy ny Stade Olympique de l’Emyrne ihany, saingy tsy nety hiakatra kianja koa ity farany, noho ny antony tsy fantatra.
Voalazan’ireo tomponandraikitry ny klioba nitafa tamin’ny gazety Taratra, fa na vonona aza izy ireo ny hiakatra kianja, matahotra ny sazy mety homen’ny federasiona, izay milaza fa mivarina any amin’ny diviziona fahatelo (D3), raha mandray anjara amin’ity lalaon’ny ligy ity.
Marihina fa araka ny fanadihadiana, efa nandefasan’ny Malagasy rugby taratasy fampitandremana, mandrara ny tsy hifaninana amin’ny fihaonan’ny ligy ireo fileovana ary efa nisy vadintany nampahafantatra ny ligy ny tsy tokony hanohizana ny lalao intsony fa mba hanaja ny antanan-tohatra sy izay voalaza.
Efa nisy fifanarahana
Raha ny re avy amin’ny Malagasy rugby dia nifanaraka ny roa tonta niaraka tamin’ny seksiona, fa fanokafana fotsiny no atao ary miandry ny fahavitan’ny fifaninanana eo anivon’ny seksiona efatra izay hamoaka ny tompondakany avy, izay vao manohy ny fihaonana ny ligy ka lasa “Top 20”. Tsiahivina fa nanomboka tamin’ny fomba ofisialy, teny amin’ny kianja Makis Andohatapenaka, omaly alahady, ny taom-pilalaovana ho an’ny seksiona Antananarivo Renivohitra sy Ambohidratrimo raha ny asabotsy teo, ny an’Atsimondrano.
Etsy ankilany, nilaza Ravelojaona Andry, filohan’ny ligin’Analamanga fa an-kasoparana tsotra izao ny ataon’ny Malagasy rugby amin’ny fampandrosoana ny taranja rugby. Manoloana iny tsy fahatanterahan’ny fifaninanana iny, miantso ny tomponandraikitra ny filohan’ny ligy, hijery sy handray andraikitra ary koa ireo mpijery handalina sy hanadihady.
Tompondaka / Sary : Tiana